Ukwenziwa kwe-Ultrasonic kweNanostructured Lipid Drug Carriers - Hielscher Ultrasound Technology
Ama-Nanostructure lipid carriers (NLCs) ayindlela esezingeni eliphakeme yezinhlelo zokulethwa kwezidakamizwa ezinobukhulu be-nano ezinomgogodla we-lipid negobolondo elinamanzi. Ama-NLC anokuqina okuphezulu, avikela ama-molecule e-bio asebenzayo ekulimaleni futhi anikeze ukukhululwa kwezidakamizwa okuqhubekayo. I-Ultrasonication iyindlela ethembekile, esebenza kahle futhi elula yokukhiqiza abathwali be-lipid be-nanostructured.
Ukulungiswa kwe-Ultrasonic kweNanostructured Lipid Carriers
Ama-Nanostructure lipid carriers (NLCs) aqukethe i-lipid eqinile, i-lipid ewuketshezi, ne-survivant endaweni ephakathi nendawo enamanzi, ebanikeza i-solubility enhle nezimpawu ze-bioavailability. Ama-NLC asetshenziswa kabanzi ukwenza izinhlelo ezizinzile zokuthwala izidakamizwa nge-bioavailability ephezulu kanye nokukhishwa kwezidakamizwa okuqhubekayo. Ama-NLC anenqwaba yezicelo ezisukela ekuphathweni komlomo kuya ekuphatheni kwabazali kufaka phakathi i-topical / transdermal, ophthalmic (ocular), kanye nokuphathwa kwamaphaphu.
Ukusakazwa kwe-Ultrasonic kanye ne-emulsation kuyindlela ethembekile futhi ephumelelayo yokulungiselela abathwali be-lipid be-nanostructured abalayishwe ngamakhompiyutha asebenzayo. Ukulungiswa kwe-NLC ye-ultrasonic kunenzuzo enkulu yokungadingi i-solvent ye-organic, amanani amakhulu wezinto ezihlanganayo noma ezifakwayo. Ukwenziwa kwe-NLC ye-Ultrasonic kuyindlela elula njengoba i-lipid encibilikisiwe ingezwa kwikhambi le-survilant bese i-sonication.
Izibonelo Eziyisibonelo Zabathwali be-Ultrasonic abalayisha i-Nanostructure Lipid
I-Dexamethasone elayishwe ama-NLC nge-Sonication
Uhlelo lwe-NLC olungeyona ubuthi olwalunobuthi lwalungiswa ngaphansi kwe-ultrasonication, okwaholela ekusatshalaliswa kosayizi omncane, ukusebenza ngempumelelo okuphezulu kwe-Dexamethasone, kanye nokungena okuthuthukile. Izinhlelo ze-NLC zazilungiswa ngo-a Hielscher UP200S i-ultrasonicator neCompritol 888 ATO, Miglyol 812N, neCremophor RH60 njengezakhi.
I-lipid eqinile, i-lipid ewuketshezi, kanye ne-survivant yancibilika kusetshenziswa isishushubezi sokushisa esishisayo ku-85ºC. Ngemuva kwalokho, i-Dexamethasone yanezelwa engxube ye-lipid futhi yahlakazeka. Amanzi ahlanzekile ayeshiswa ku-85ºC kanti lezi zigaba zombili zazenziwa zaqanjwa (ngamaphesenti angama-70 amplitude ngemizuzu eyi-10) Hielscher UP200S homogenizer ye-ultrasonics. Uhlelo lwe-NLC lwalupholwe kubhavu lweqhwa.
Ama-NLC alungiselelwe nge-ultrasonic abonisa ukusatshalaliswa kosayizi omncane, ukusebenza kahle kwe-DXM ukufaka okuningi, kanye nokungena okuthuthukile.
Abaphenyi bancomela ukusetshenziswa kweqoqo eliphansi le-patididi (isib. I-2,5% ye-survivant ne-10% ukuthola i-lipid ephelele) ngoba-ke izingxenye ezibalulekile zokuqina (Zave, I-ZP, i-PDI) kanye nomthamo wokulayisha izidakamizwa (i-EE%) kufanelekile ngenkathi ukugxilwa kwe-emulsifier kungahlala kumazinga aphansi.
Ama-NLC we-retinyl Palmitate-alayishwe nge-Sonication
I-retinoid isithako esetshenziswa kabanzi kwezokwelapha zesikhumba zemibimbi. I-retinol ne-retinyl Palmitate ziyizingxube ezimbili ezivela eqenjini le-retinoid ezinamandla okufaka ukuqina kwe-epidermis futhi kusebenza ngempumelelo njenge-anti-wrinkle agent.
Ukwenziwa kwe-NLC kwalungiswa kusetshenziswa indlela ye-ultrasonication. Ukuqanjwa kwakuqukethe u-7.2% we-cetyl Palmitate, u-4.8% we-oleic acid, u-10% we-Tween 80, 10% we-glycerin, kanye no-2% we-retinyl palmitate. Izinyathelo ezilandelayo zithathwe ukukhiqiza ama-NLCs we-retinyl Palmitate-egcwele umthwalo: Ingxube ye-lipids encibilikisiwe ihlanganiswe ne-surfactant, i-co-surfactant, i-glycerin kanye namanzi deionized ku-60-70 ° C. Le ngxube ivuselelwa nge-high-shear mixer ngo-9800rpm imizuzu emi-5. Ngemuva kokuthi i-pre-emulsion isungule, le pre-emulsion ngokushesha ifakwa sonto kusetshenziswa i-homogenizer ye-probe-hlobo ye-2 pro. Ngemuva kwalokho i-NLC etholakele igcinwa emazingeni okushisa asekamelweni angama-24 h. I-emulsion igcinwe emazingeni okushisa asekamelweni angama-24 h bese kuthi isilinganiso se-nanoparticle silinganiswe. Ifomula ye-NLC ikhombise osayizi bezinhlayiyana kuhlu lwe-200-300nm. i-NLC etholakele inombala ophuzi ophuzi, usayizi we-globule ongu-258 ± 15.85 nm, kanye nenkomba ye-polydispersity ka-0.31 ± 0.09. Isithombe se-TEM esingezansi sibonisa ama-NLCs alayishwe nge-retinyl eyenziwe ngomshini we-patinyl.
UP400St, i-400 watts enamandla homogeniser enamandla ama-watts, yokwenza umkhiqizo we-nanostructured lipid carriers (NLCs)
I-Morphology yama-NLCs ahlelwe ngokwenziwe i-retinyl palmitate NLCs: (A) ukukhulisa kwe-10000x, (B) ukukhulisa kwe-20000x, kanye (C) nokukhulisa i-40000x
umthombo: Pamudji et al. 2016
I-Zingiber zerumbet-Layisha NLCs nge-Sonication
Izithwali ze-lipid ze-Nanostructured ziqukethe ingxube ye-lipid eqinile, i-liquid-lipid ne-survivant. Lezi zinhlelo ezinhle kakhulu zokulethwa kwezidakamizwa ukuphatha izinto ezi-bioactive nge-solubility engemihle yamanzi kanye nokwandisa ukusebenza kwazo kwe-bioavailability kakhulu.
Izinyathelo ezilandelayo zenziwa ukwakha i-Zingiber zerumbet-Layisha NLCs. I-1% lipid eqinile, isb. i-glyceryl monstearate, ne-4% yolid e-liquid, okungukuthi uwoyela we-coconut we-virgin, kuxutshwe futhi kuncibilike ngo-50 ° C ukuze kutholakale isigaba esingajwayelekile, esicacile se-lipid. Ngemuva kwalokho, i-1% i-zingumb zerumbet yamafutha yanezelwa esigabeni se-lipid, ngenkathi izinga lokushisa laligcinwa ngokuqhubekayo yi-10 ° C ngaphezulu kwezinga lokushisa lokuncibilika kwe-glyceryl monstearate. Ukulungiselela isigaba samanzi, amanzi ancitshisiwe, aphakathi kuka-80 no-soy lecithin ahlanganiswa ndawonye ngesilinganiso esifanele. Ingxube enamanzi yangezelelwa ngokushesha engxenyeni ye-lipid ukwakha ingxube ye-pre-emulsion. I-pre-emulsion yabe isisenziwa i-homogenizer isebenzisa i-homogenizer ephezulu ye-shear ngo-11,000 rpm ngehora le-1. Ngemuva kwalokho, i-pre-emulsion yenziwa sonication kusetshenziswa i-probe-hlobo ultrasonicator kuma-50% amplople ngemizuzu engama-20, Ekugcineni, ukuhlakazeka kwe-NLC kwagcotshwa kubhavu wamanzi e-ice ukufudumeza kwegumbi (25 ± 1 ° C) ukuqeda ukumiswa ku okugeza okubandayo ukuvimba izinhlayiya ezihlanganisiwe. Ama-NLC agcinwe ku-4 ° C.
Ama-NLC we-Zingiber zerumbet-Layisha abonisa usayizi we-nanometer we-80.47 ± 1.33, inkomba ye-polydispersity ezinzile ka-0.188 ± 2.72 necala elingahle likhona le-zeta le-38.9 ± 2.11. Ukusebenza kokubopha okubonakalayo kukhombisa amandla okuphatha i-lipid ukufaka amandla kawoyela we-Zingiber zerumbet ngaphezulu kokusebenza kahle kwe-80%
Ama-NLC weValsaratan-alayishwe nge-Sonication
IValsaratan iyi-angiotensin II receptor blocker esetshenziselwa umuthi we-antihypertensive. IValsartan ine-bioavailability ephansi ye-approx. Ama-23% kuphela ngenxa yokuncibilika kwamanzi okuwukuphela kwento. Kusetshenziswa indlela ye-melt-emulsation ye-ultrasonic encibilikayo evunyelwe ukulungiselela ama-VLCaratan-Layisha NLCs ane-bioavailability eyenziwe ngcono kakhulu.
Kalula, isixazululo esinamafutha seVal besixutshaniswe nenani elithile lezinto ezincibilikisiwe ze-lipid kumazinga okushisa ayi-10 ° C ngaphezulu kwendawo yokuncibilikisa i-lipid. Isixazululo esinamanzi amaningi senziwa ukuqeda izinsimbi ezithile zo-Tween 80 and sodium deoxycholate. Isixazululo esibuhlungu saphinde safudumala kulelo degree lokushisa elifanayo futhi sahlanganiswa nesixazululo somuthi esinamafutha nge-probe-sonication yemizuzu engu-3. ukwakha i-emulsion. Ngemuva kwalokho, i-emulsion eyakhiwe yahlakazeka emanzini apholile ngokugudluzwa kwamandla kazibuthe imizuzu eyi-10. I-NLC eyakhiwe yahlukaniswa nge-centrifugation. Amasampula aqhamuka kwabaphezulu athathwe ahlaziywa ukuze kuhlolwe i-Val kusetshenziswa indlela evunyelwe ye-HPLC.
Indlela ye-melt-emulsation ye-ultrasonic inezinzuzo eziningi kufaka phakathi ukungabi nalula ngesimo esincane sokucindezela futhi kuncishwe i-soltiv enobuthi e-organic. Ukusebenza kahle kokufaka okufakiwe kwaba ngu-75.04%
Ezinye izinto ezisebenzayo ezifana ne-paclitaxel, i-clotrimazol, i-domperidone, i-puerarin, ne-meloxicam nazo zifakwe ngempumelelo kuma-nanoparticles e-lipid eqinile ne-nanostructured lipid carriers esebenzisa amasu we-ultrasonic. (cf. Bahari kanye neHamishehkar 2016)
I-Ultrasonication njengendlela yokulungiselela ukwakheka kwe-nano lipid carriers (NLCs) ingasetshenziswa njengendlela ebandayo noma eshisayo yehomogenization. I-homogenization ye-Ultrasonic iphumela ekuhanjisweni kosayizi omncane wezinhlayiyana, ezithuthukisa ukuqina kwe-NLCs kanye nendawo yokugcina impahla.
I-Ultrasonic Cold Homogenisation
Lapho kusetshenziswa inqubo ebandayo ye-homogenization ebandayo ukuphatha abathwali be-lipid be-nanostructured, okusho izidakamizwa, iyoncibilika ku-lipid encibilikayo bese ipholile ngokushesha isebenzisa i-nitrogen ewuketshezi noma iqhwa elomile. Ngesikhathi sokupholisa, ama-lipids aqina. Isisindo esiqinile se-lipid ke usayizi we-nanoparticle womhlabathi. Ama-nanoparticles we-lipid ahlakazeka ngesixazululo esibandayo se-abandayo, anikeze ukumiswa kwangaphambi kokubanda. Ekugcineni, lokhu kumiswa kuyenziwa nge-sonication, kuvame ukusebenzisa i-ultrasonic flow cell reaction, endaweni yokushisa yasekamelweni.
Njengoba izinto zishiswa kanye kuphela esinyatsweni sokuqala, i-homogenization ebandayo ye-ultrasonic isetshenziselwa kuphela ukwakha izidakamizwa ezithinta ukushisa. Njengoba ama-molecule amaningi we-biioactive nezakhi zemithi ezithambekele ekuthambiseni ukushisa phansi, i-homogenization ebandayo ye-ultrasonic isicelo esisetshenziswa kabanzi. Enye inzuzo yendlela yokubamba amakhaza ebandayo ukugwema kwesigaba esinamanzi, okwenza kube lula ukufaka ama-hydrophilic molecule, angahle ahlukanise isigaba se-lipid esesigabeni samanzi ngesikhathi sokushisa okukhulu.
Lapho i-sonication isetshenziswa njengecebo elishisayo le-homogenization, ama-lipids ancibilikisiwe kanye ne-syntheythi esebenzayo (ie isithako esisebenza ngamakhemikhali) asakazeka kwisithako esishisayo ngaphansi kokuvusa okukhulu ukuthola i-pre-emulsion. Ngenqubo eshisayo ye-homogenization kubalulekile ukuthi zombili izixazululo, ukumiswa kwe-lipid / izidakamizwa kanye nomuntu osebenza ngokweqile kuhlushwe ngamazinga okushisa afanayo (cishe. 5-10 ° C ngaphezulu kwendawo encibilikayo ye-lipid eqinile). Esinyathelweni sesibili, i-pre-emulsion ivele iphathwe nge-sonication esebenzayo ephezulu ngenkathi igcina izinga lokushisa.
Ama-Ultrasonicators aphezulu enza umsebenzi we-Nanostructured Lipid Carriers
Hielscher Ultrasonics 'izinhlelo ezinamandla ze-ultrasonic zisetshenziswa emhlabeni wonke emithini R&I-D nokukhiqizwa ukukhiqiza izithako zezidakamizwa ezisezingeni eliphakeme ze-nano ezifana ne-lipid nanoparticles (SLNs), i-lipid carriers (NLCs), ama-nanoemulsions nama-nanocapsule. Ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ayo, abakwaHielscher bahlinzeka ngama-ultrasonicators avela ku-compact, nokho enamandla aphethwe ngesandla ama-lab homogeniser nama-bench-top ultrasonicators ezinhlelweni ze-ultrasonic zezimboni ngokugcwele zokukhiqizwa kwamanani aphezulu wezinqubo zokwenziwa kwemithi. Uhla olubanzi lwama-sonotrodes nama-reactor atholakalayo ukuze kuqinisekiswe ukusethwa okuphezulu komkhiqizo wakho wezithwali ze-lipid ze-nanostructured (NLCs). Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 emsebenzini osindayo nasezindaweni ezifunwayo.
Advanced Nano-Sized Drug Carriers
Ama-Nanoemulsions, ama-liposomes, ama-niosomes, ama-polymeric nano-izinhlayiyana, ama-nanoparticles aqinile-ne-lipid nanoparticles asetshenziswa njengezinhlelo ezisezingeni eliphezulu zokulethwa kwezidakamizwa ukwenza ngcono i-bioavailability, ukunciphisa i-cytotoxicity kanye nokufeza ukukhishwa kwezidakamizwa okuqhubekayo.
Isakhiwo se-schematic of a) i-lipid nanoparticle b) eqinile yesithwali se-lipid
Umthombo: Bahari noHamishehkar 2016
I-nanoparticles yama-solid solid-lipid-based nanoparticles (SLBNs) inezinhlobo ezimbili zabathwali bezidakamizwa nano-sized, lipid nanoparticles (SLNs) ne-nanostructured lipid carriers (NLCs). Ama-SLN nama-NLC ahlukaniswa ukwakheka kwe-matrix eqinile yezinhlayiya:
I-solid-lipid nanoparticles (SLNs), eyaziwa nangokuthi i-lipospheres noma i-lipid nanospheres eqinile, ziyizinhlayiya ze-submicron ezinosayizi ophakathi kuka-50 no-100nm. Ama-SLN enzelwa ama-lipids ahlala eqinile egumbini lokushisa kanye nokushisa komzimba. I-lipid eqinile isetshenziswa njengesixhobo se-matrix, lapho izidakamizwa zihlanganiswa khona. Ama-Lipids wokulungiselela ama-SLN angakhethwa kusuka kuma-lipids ahlukahlukene, kufaka phakathi i-mono-, di-, noma i-triglycerides; ingxube ye-glyceride; nama-lipid acid. I-lipid matrix bese iqiniswa ngabasebenza ngama biocompatible.
Izithwali ze-lipid ze-Nanostructured lipid (NLCs) zingama-nanoparticles asuselwa ku-lipid enziwe nge-lipid matrix eqinile, ehlanganiswe ne-lipids noma i-liquid. I-lipid eqinile ihlinzeka nge-matrix ezinzile, evimbela ama-mocule we-bioactive, isb. Izidakamizwa, futhi evimbela izinhlayiya ukuthi zingahlangani. I-liquid lipid noma amaconsi kawoyela ngaphakathi matrix aqinile we-lipid athuthukisa umthamo wokulayisha izidakamizwa wezinhlayiya.